हेर्नुहोस्, प्रार्थना, र काम, भाग 2
पाठ: मर्कूस 13: 32-37
32 तर त्यस दिन र त्यो घडी कुनै मानिसलाई थाहा छैन, होइन, स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू होइन, न पुत्र, तर बुबा।
33 तिमीहरू हेरौं, हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्: के तपाईं समयको बारेमा थाहा छैन।
34 पुत्रको यात्राको लागि मानिस मानिसको रूपमा हो, जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना सेवकहरू र हरेक कामको निम्ति अधिकार दिए, र ढोका हेर्न हेर्न आज्ञा दिए।
35 यसकारण तिमीहरू हेरौं: तिमीहरू जान्दछौ जब घरको मालिक आउँदैन, आउँदो वा आधी रातमा, भोजपुर वा बिहान बिहान।
36 अचानक आउँदै उसले तिमीलाई सुतिरहेको छ।
37 अनि म तिमीहरूलाई भन्दछु म सबैलाई भन्दछु, हेर्नुहोस्।
बिली ग्राहमले यसो भने, "ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा बाइबल शिक्षाले 'प्रमोदद' प्रचारको रूपमा सोचेको थियो। तर अब होइन। यो आशाको एक मात्र रे हो जुन एक क्षणिक संसारमा कहिल्यै उज्ज्वल बीमको रूपमा चमकता हुन्छ। "
हाम्रो अन्तिम सन्देशमा, हामीले द्वार-रक्षकको दृष्टान्त देख्यौं, वा मालिकको परिवारको दृश्यावलोकन गर्न, हामीले हामीलाई के गर्नु पर्छ भन्ने निर्देशन दिई हामी दोस्रो आगमन येशूलाई ख्रीष्टको आउँदैछौं। परमेश्वरको अनुग्रहमा, हामी फर्कनुअघि विश्वासी र व्यस्त रहनुपर्छ। हामी प्रत्येकसँग एक प्रभुको शारीरिक अनुपस्थितिको बीचमा काम गर्ने छ।
येशूले यो दृष्टान्त तीनवटा आज्ञाहरू सुरू गर्छ जुन हामीले पालन गर्नुपर्छ। पहिलो छ, "ले लो लो।" यो वाक्यांश को लागी वा ध्यान दिन को लागी मतलब छ। येशू हामीलाई उहाँलाई ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँका आज्ञाहरू र उहाँको उदाहरण। हामी यस पृथ्वीमा उहाँका प्रतिनिधि हौं। यदि तपाइँ एक विशेष प्राधिकरण भन्दा पहिले कसैले तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्न कसैलाई पठाउनुभयो भने, तपाइँ उनीहरूलाई निश्चित तरिकाले सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ। त्यस्तै गरी, येशू हामीलाई संसारमा एक निश्चित तरिकामा सञ्चालन गर्न चाहानुहुन्छ किनभने संसारले हामीलाई हेर्दै आएको छ कि येशू येशू जस्तै हुनुहुन्छ। यदि हामी येशूको उदाहरण पछ्याइरहेछौं, हामी उहाँलाई ध्यान दिनुपर्छ।
यद्यपि, हामीमध्ये धेरैले हाम्रो आँखामा विश्वव्यापी पछि लागेका छन्, राजनीतिक नेताहरू, अथवा व्यक्तिगत प्रगतिमा। हामी येशूका फिर्तीको लागि तैयार हुनुहुन्न, न त हामी तयार हुदैछौं। हामीले हाम्रा सबै चीजहरू मात्र होइन तर येशू ख्रीष्ट हाम्रो तयारी गर्यौं। आज तपाई को ध्यान दिदै हुनुहुन्छ? तिम्रो कान को को हो? तिम्रो आँखा को छ? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कसले तपाईंको दिमागलाई समातेको छ? के तपाईं यूहन्नासँग भन्नुहुन्छ, "तैपनि, आउनुहोस्, प्रभु येशू"? वा, के तपाईं भन्नुहुन्छ, "आओ, प्रभु येशू, तर मैले के गरिरहेपछि के गरिनँ पछि?"
हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई यो जीवनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौं जबसम्म हामी येशूलाई बताइरहेछौं। यदि हामी संसारबाट पठाइएका सन्देशहरूमा ध्यान दिनेछौं, मासु र शैतानले हामी असन्तुष्ट, चिन्तित, निराश र निराशको अन्त्य गर्नेछौं। यो संसार हाम्रो गहिरो लामो समयसम्म पूरा गर्न असमर्थ छ। अनि हामीले समय बर्बाद र पूर्णता पछ्याउन सक्दैनौं जहाँ भेट्टाउन सकिँदैन। बरु, मालिकको परिवारको सदस्यको रूपमा, गरौं घरको मालिक, येशू ख्रीष्टलाई ध्यान दिनुहोस्। यद्यपि यो देखिन्छ कि उनी लामो यात्रामा गएका छन्, उहाँ सधैं हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुन्न, र एक दिन उहाँले हामीलाई स्थानमा लिन आउनुहुनेछ उहाँले हाम्रो लागि तयार गर्नुभएको छ।
फ्रान्सिस जे क्रोस्बीले यस्तो लेखे:
हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्दा मास्टर आउँछ,
यदि बिहान, दोपहर, वा रातमा,
उनी हरेक विन्डोमा एक लैंप पाउन सक्छन्,
छायांकन, र सफा र उज्ज्वल जलिरहेको।
हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् र नचाहिने हाम्रो पोष्ट छोड्नुहोस्,
हामी दुलहीको आवाज सुन्नेछौं;
त्यसपछि उहाँसँग विवाह समारोहमा भाग लिन,
हामी सधैं रमाउनेछौं।
हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले आज्ञा दिनुहुन्छ;
हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्, 'टाउको लामो हुँदैन।
चाँडै उहाँले घरलाई आफ्ना प्रियजनहरू भेला गराउनुहुनेछ,
गीतको खुसी भित्तामा।
अब, यदि तपाईं येशू ख्रीष्टमा विश्वासी हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई उहाँमा भरोसा राख्न आग्रह गर्दछु किनभने उहाँ फेरि आउनुभयो र तपाईं पछि बाँच्न चाहनुहुन्न। यहाँ तपाईं कसरी पाप र पापको नतिजाबाट मुक्तिको लागि आफ्नो विश्वास र भरोसा राख्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो, तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईं पापी हुनुहुन्छ, र तपाईंले परमेश्वरको व्यवस्था तोड्नु भएको छ। बाइबलले रोमी 3:23 मा भनिएको छ: "सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाको छोरो।"
दोस्रो, तथ्य स्वीकार गर्नुहोस् कि पापको लागि सजाय हो। बाइबलले रोमी 6:23 मा यसो भन्छ: "पापको वेदना मृत्यु हो ..."
तेस्रो, तथ्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईं नरकको बाटोमा हुनुहुन्छ। मत्ती 10:28 मा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो: "र शरीरलाई मार्न नपाओस्, तर आत्मालाई मार्न सक्षम छैन: तर बरु तिनीहरू आत्मा र शरीर दुवै नरकमा नष्ट गर्नदेखि डराउँछन्।" साथै, प्रकाश 21: 8 मा उल्लिखित बाइबल यसो भन्छ: "तर भयभीत, अविश्वसनीय, घृणित, हत्याराहरू, वामपन्थीहरू र जादूगरहरू, मूर्तिपूजाहरू र सबै झूटाहरू झन् झन् झन् झन् झन् झन् आगोमा डुबेर बस्छन्। ईश्वर: दोस्रो मृत्यु हो। "
अब त्यो खराब खबर हो, तर यहाँ सुसमाचार छ। यूहन्ना 3:16 मा येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो: "परमेश्वरको निम्ति यति धेरै प्रेम थियो कि उहाँले आफ्नो मात्र पुत्र पुत्र दिनुभयो, जसले जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछ, नष्ट नगर्नु, तर अनन्त जीवन छ।" केवल तपाईंको विश्वासमा विश्वास गर्नुहोस् कि येशू ख्रीष्ट तपाईंका पापहरूका निम्ति मर्नुभयो, दफन गरियो, र तपाईंहरूका लागि ईश्वरमा बाँच्न सक्दछ ताकि तपाईंहरूका लागि परमेश्वरको शक्तिले मरेकाहरूबाट उठे। प्रार्थना र उहाँलाई आज आफ्नो मनमा आउन सोध्नुहोस्, र उहाँले हुनेछ।
रोमी 10:9र 13 ले भन्छ, "यदि तिम्रो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्दछ, र तिम्रो हृदयमा विश्वास गरोस् कि परमेश्वरले उसलाई मरेकाहरूबाट उठाउनुभएको छ, तपाईंले मुक्ति पाउनुहुनेछ ... को को लागि कसको नाममा बोलाइनेछ प्रभु उद्धार हुनेछ। "
यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट तपाईंको पापको लागि क्रूसमा मर्नुभयो, मर्नुभयो, र मरेकाहरूबाट उठ्नुभयो, र आज उहाँ आफ्नो मुक्तिको लागि उहाँमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ, कृपया मलाई यो सरल प्रार्थना प्रार्थना गर्नुहोस्: पवित्र पिताजी परमेश्वर, म बुझ्छु कि म पापी हुँ र मैले मेरो जीवनमा केही खराब काम गरेँ। म मेरा पापहरूको लागि माफी चाहन्छु, र आज म मेरो पापबाट टाढा छनौट गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टको निम्ति, कृपया मलाई मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्। म मेरो सम्पूर्ण हृदयमा विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो, दफन गरियो र फेरि उठ्नुभयो। म येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा गर्दछु र म यस दिन अगाडी भगवानको रूपमा पछ्याउन चाहन्छु। प्रभु येशू, कृपया मेरो हृदयमा आउनुहोस् र मेरो प्राण बचाउनुहोस् र आज मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्। एमेन।
यदि तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई तपाईंको मुक्तिदाताको रूपमा मात्र विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंले प्रार्थना गर्नुभयो र यो तपाईंको हृदयबाट अर्थ दिनुभएको थियो, म तिमीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा आधारित भन्छु, अब तपाईं नरकबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईं स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको परिवारमा स्वागत छ! बधाई छ जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने र यी ख्रीष्ट येशूलाई तपाईंको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अधिक जानकारीको लागि तपाईं ख्रीष्टमा आफ्नो नयाँ विश्वासमा बढ्न मद्दतको लागि, सुसमाचार लाइट सोसायटीमा जानुहोस् र पढ्नुहोस् "तपाईं दरवाजा मार्फत के गर्न पछि के गरौं।" येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 10:9मा भन्नुभयो, "म ढोका हुँ: मेरो द्वारा यदि कुनै मानिसले भित्र प्रवेश गर्छ, उसले मुक्ति पाउनेछ, र बाहिर र बाहिर जान्छ, र चरा फेला पार्छ।"
परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी तिमीलाई माया गर्छौ। अनि परमेश्वरले तपाईंलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ।